Silicon Carbide Element, Silicon Carbide Ihe eji eme ihe - SICTECH
A na-eji ngwaahịa anyị eme ihe n'ọtụtụ ụlọ ọrụ ọgwụgwọ okpomọkụ dị ka iko, seramiiki, ihe ndị magnetik, ntụ ntụ, ma bupụ ya karịa mba 30 na mpaghara ụwa.
Eectronics ụlọ ọrụ
Anyị na-e n'ichepụta elu-tech na elu-edu ngwaahịa na mmụọ nke na-aga n'ihu ọhụrụ.
SICTECH na-enye nkọwa dị iche iche nke ezigbo sịlịkọn carbide kpo oku: GD (ogologo mkpanaka) ụdị, HGD (oke njupụta ogologo), ụdị U, W (mpaghara atọ), ụdị LD (otu eri), LS (eri abụọ) ) ụdị na ngwaahịa ndị ọzọ.
W ụdị (atọ frasi) sịlịkọn carbide kpo oku el ...
LD ụdị (otu gburugburu) sịlịkọn carbide kpo oku ...
Site na November 1st ruo 3rd, 2019, a na-eme 7th Taizhou International Electrothermal Technology and Equipment Exhibition na Taizhou International Expo Center. Jiangsu Huaneng Silicon Carbon Ceramics Co., Ltd. ka a sonyere na ...
Ọ bụrụ na ndị ụdị ụdị sịlịkọn carbon mkpara eguzogide dị iche iche, mgbe usoro ndị na-eguzogide nke elu sịlịkọn carbon mkpara ibu bụ dịtụ lekwasị, mfe ime ka a ngwa ngwa na-amụba eguzogide nke sịlịkọn carbon ruo, ebelata ọrụ ndụ. Silicon carbide bụ n'ozuzu na usoro, na yiri con ...